(L) စစ်တပ်ယောက်ျားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံမှန်ထက်သုံးဆ - သင်၏ Brain On Porn
မှတ်ချက်များ: တကယ်တော့အဲဒီ ED နှုန်းထားများမဟုတ်3ဆစံဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများထုတ်ဖေါ်အဖြစ် 30% သို့မဟုတ်မြင့်မား၏လူပျိုတို့အတွက်မကြုံစဖူး ED နှုန်းထားများသစ်ကိုစံနေသောခေါင်းစဉ်: လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4.
ယောက်ျားအမေရိကန်စစ်တပ်မှဝင်ရောက်ခဲ့သည်နေသောအသက်အရွယ် 40 နှင့်အငယ်အလားတူအသက်အရပ်သားယောက်ျားထက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ရှိသည်ဖို့သုံးကြိမ်ထက်ပိုများပါတယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်စစ်ရေးယောက်ျားတစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်အရသိရသည်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိသတင်းပို့ပါ။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏ပထမဆုံးအကဲဖြတ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-function ပြဿနာများ အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြား, 367 ယောက်ျားဗျောလံတီပါဝင်သည်, အသက်အရွယ် 21 မှ 40 ။ သင်တန်းသားများကို 2013 အတွက်အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလများတွင်ရှစ်ပတ်ကြာကာလအတွင်းအွန်လိုင်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-function စစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအမျိုးသားစစ်သည်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပြproblemsနာများပျံ့နှံ့မှုအားခန့်မှန်းရန်၊ သူတို့၏ဘဝအရည်အသွေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့်ကုသမှုခံယူရန်အတားအဆီးများကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်ဟုကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှသုတေသနလက်ထောက်ပါမောက္ခ Sherrie L. Wilcox ကပြောကြားသည် Los Angeles မှာလူမှုရေး၏အလုပ်နှင့်လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာတစ် ဦး ။
အဆိုပါသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ ED ဘုံခဲ့သည်အတူ ဒါဟာရှိခြင်းလေ့လာမှုအစီရင်ခံထဲမှာအတော်လေးကျန်းမာနုပျိုစစ်မှုထမ်းများ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထက် ပို. ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ယေဘုယျနှုန်းသည်အလားတူအသက်အရွယ်အရပ်သားအထီးများတွင် ED နှုန်းထက်သုံးဆပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်အသက် 10 ကျော်အထက်အရပ်သားယောက်ျားထက် 40 ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ် "ဟု Wilcox တိုက်ရိုက်သိပ္ပံသို့ပြောသည် “ သို့သော်အစိုးရိမ်ဆုံးအချက်အလက်များမှာအသက် ၃၆ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အရွယ်အုပ်စုတွင် ED နှုန်းသည် ၄၀ နှစ်ကျော်အရပ်သားများထက်နှစ်ဆနီးပါးပိုများသည်။ ”
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-function ကိုပြဿနာတွေနဲ့အသက်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏အရည်အသွေးများအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့သည်, သူကဆိုသည်။ ထိခိုက်လူ 12 သာ, သို့သော်လေ့လာမှုအရသိရသည်သူတို့၏ပြဿနာများအတွက်လက်ခံရရှိကုသမှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ [10 အံ့သြစရာလိင်စာရင်းအင်းများ]
Wilcox ၏မြင့်နှုန်းထားများဆိုပါတယ် လူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြissuesနာများ၊ ၄ င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များသို့မဟုတ်အခြားသိသာထင်ရှားသည့်အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြသနာများကြောင့်စစ်တပ်အတွင်း၌စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သို့သော်စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများသည်အသက်အရွယ်မရွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
Wilcox ကသူမအနေဖြင့်အနာဂတ်တွင်နှစ်ရှည်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အမျိုးသမီးများကိုပါအာရုံစိုက်နိုင်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီလေ့လာမှုကအရေးကြီးတယ်၊ အဲဒါကဒီပြproblemနာကိုသတိပြုမိစေပြီးစစ်တပ် ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ရေဒါပေါ်မှာထားတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ “လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု ငယ်ရွယ်သောစစ်ရေး ၀ န်ထမ်းများတွင်နစ်နာမှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမခံရသည့်ပြproblemနာနှစ်ရပ်စလုံးရှိသော်လည်း၊
ဇူလိုင်လ 28, 2014